Iyunithi 2-Betsy's Downtown Studio, Indawo yokupaka yasimahla
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguErin
Esi situdiyo sale nkulungwane yaphakathi sisembindini wedolophu, umgama wokuhamba ukusuka kwindawo yokutyela, ukuya kuthenga, kunye neMyuziyam yaseLauren Rogers yoBugcisa. Isanda kulungiswa, uya kuba nokufikelela ngokulula kuzo zonke izinto eziluncedo zeDolophu yethu yaseKhaya. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala ukuba ujonge ukujonga iSixeko Esihle!
Ukuba ufuna ukuziva ngokwenene iDowntown Laurel, yiza uhlale eBetsy eMagnolia. Izitudiyo zika-Airbnb ezihlala kwindawo yevenkile yethu ethambileyo ye-ayisikrimu. Iyunithi ihonjiswe ngesitayile kumbindi wenkulungwane yokuhombisa yanamhlanje ukulinganisa ixesha leBetsy the Blue Bug.
IYunithi yeSitudiyo yeBetsy #2 inobubele kwiSilo. Kukho iwasha kunye nesomisi ebekwe kwindawo, kwaye unokucela inkonzo ukuba iyafuneka, ngentlawulo encinci eyongezelelweyo. Indawo yethu ilungele abantu aba-2, kodwa sineBhedi ye-Futon eya kungena ngokukhululekileyo umntu owongezelelekileyo, kuxhomekeke kwindlela ofuna ukukhululeka ngayo. Ubude obuyi-18 ft. iisilingi zenza iYunithi ye-Betsy izive iphangalele ngakumbi ngelixa ikunika incasa yento esi sakhiwo sembali sasiyiyo emva kwemini.
Ngaphakathi kweyunithi, uya kufumana umenzi wekofu / ikofu, ifriji encinci, iimagi, kunye nezinto eziyimfuneko ezifana nezitya zenja, iibhegi zenkunkuma, ibhedi epholileyo (ungakhathazeki, sihlamba ngokucokisekileyo kwaye sicoce), nokunye!
Asinakulinda ukuba ube namava obubele bedolophu yaseLaurel, eMississippi. Yabonani kungekudala!